.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ရိုးရိုးလေးနဲ့ လှတဲ့ Blogger Template လေးပါ
ရိုးရိုးလေးနဲ့ လှတဲ့ Blogger Template လေးပါ
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သဲပုံက သူ ကဗျာတွေရေးတဲ့ Blog လေးကို ပြင်ပေးဖို့ပြောတုန်းက ရိုးရိုးလေးနဲ့ လှတဲ့
ကဗျာတွေနဲ့လည်း လိုက်ဖက်မယ့် Template လေးကို ရွေးပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ခုဒီနေ့တော့
ကဗျာတွေ ၊ စာပေတွေ အဓိက ထားပြီး ရေးတင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ၊ ရိုးရိုးလေးနဲ့ လှတဲ့ Template မျိုး လေးတွေ
သဘောကျတဲ့ သူတွေအတွက် အဲဒီ Template လေးကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နမူနာကြည့်ရန် ဒီမှာ နှိပ်ပါ။
ကြိုက်နှစ်သက်လို့ သုံးချင်တယ်ဆိုရင် Template .XML ဖိုင်လေးကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Template ကို သင့် Blog မှာသုံးဖို့ Upload တင်နည်း မသိရင် ဒီနေရာလေးမှာ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Template ကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေခြင်း လုံးဝ ( လုံးဝ ) ခွင့်မပြုပါ။
Posted by Thurainlin at 09:50